मोफशलका नियिष के.सी आफ्नो क्यारियरका लागी संघर्षरत : Page3Nepal | Complete Entertainment Portal |
May 29, 2019 Filed under Report Update >>>> Please Subscribe our Youtube Channel
दाङ्ग, लमही स्थाई घर भएका नियिष के.सी नेपाली मोडलिंग क्षेत्रमा लामो फड्को मार्ने उद्देश्य सहित लागी परेका छन् ।
२०५२ सालमा जन्मेका नियिष हाल राजधानीमा आयोजना हुने प्राय सबै खालका मोडलिंड कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुदै आइरहेका छन् । गोरो बर्षणका उनी कुनै चलचित्रका नायक भन्दा कम छैनन् । यहाँ प्रतिभाको भन्दा पनी चाकडीको आबस्यकता पर्दो रहेछ जुन कला आफू संग छैन भन्छन् ।
आफ्नो पिता-माता र परिबारका सदस्यलाई आदर्श मान्ने उनलाई यो क्षेत्रमा आउन उनको पिता-माताको हौसला र साथ रहेको बताउछन् । अभिभावकको साथ नभएत कसरी टिक्न सक्नु ? खर्च पुर्याउनै पर्यो । उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक फेशन कार्यक्रममा पंक्तिकार संग भेट्दा उनी निकै उत्साहित देखिन्थे । यूवा पिढी रोजगारीको निम्ति बिदेशीन परि रहेको अबस्थामा आफू भने यही नेपालमा नै कुनै न कुनै तरिकाले जिविकोपार्जन गर्ने सोचमा रहेको उनी बताउछन् । छोटो कुराकानीका क्रममा उनले आफू दत्त चित्त भएर नेपाली फेशन-मोडलिंग क्षेत्रमा लाग्ने बतएका छन् ।
केन्द्र भन्दा बाहिर फेसन-मोडलिंग क्षेत्र अलिक फस्टाउन सकेको छैन । झन आफू जस्ता मोफसलका यूवाहरु त चाहना हुँदा हुँदै पनी गुम्सिएर बस्न परेको बताउछन् । जिल्लामा फेशन-मोडलिंग सम्बन्धी कार्यक्रम तुलनात्मक कम हुने गरेको उनी बताउछन् । कार्यक्रम आयोजकहरु पनी पर्यटकिय शहरमा मात्र कार्यक्रम सिमित राख्दछन् । तर फेसन-र्याम्प अनी मोडलिंग क्षेत्रलाई चाहिने हाइट-बडी-लुक्स जिल्लाका युवाहरुमा पनी हुन्छ भन्ने आयोजकले बिर्सने बताउछन् ।
अहिले काठमाण्डौमा आयोजना हुने फेसन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा मोडेल नियिष के.सी. को सहभागीता बाक्लिएको छ । उनी भन्छन् आयोजकहरुले संम्पर्क गर्न थाल्नु भएको छ । म मेरो पेशालाई सम्मान गर्छु । दत्त-चित्त दिएर काम पनी गर्छु । मिहेनत गर्ने हो सफल असफल बनाउने त भगवान् को हात ! संघर्ष नै जिवनहो भन्ने आफूले बुझेको बताउदै उनी थप्छन् सिक्दै छु आफूलाई परिस्कृत गर्दै लाने हो । भविष्यमा आफ्नो टार्गेट भनेको सिनेमा हो भन्छन् । काठमाण्डौ आए पछि दुई दर्जन भन्दा बढी फेशन कार्यक्रममा सहभागी भएका उनको चाहना आफै पनी फेसन कार्यक्रम आयोजना गर्ने रहेको छ । मोफसलमा आयोजना गरेर स्थानिय चाहना भएका युवाहरुलाई राष्ट्र अनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चित बनाउने उनको चाहना छ । आफू भित्र जस्तो चाहना छ त्यस्तै मोफसलका यूवाहरुमा पनी छ र त्यसलाई पुरा गर्नु पनी आफ्नो उद्देश्य रहेको उनी बताउछन् ।
स्टेज शो र -याम्प मा सहभागीता बाहेक मोडेल के.सी ले म्यूजिक भिडियोमा पनी काम गरेका छन् । गायिका रुपा बिष्टको गीतको भिडियोमा उनले अभिनय गरेका छन् । परिपक्व हुन अनुभव नभाई हुन्न भन्ने सोच राखेका उनले मौका आएको समयमा जसरी पनी सहभागीता जनाउने गरेको बताउछन् । हाल काठमाण्डौमा नै रहेर फेसन क्षेत्रमा संघर्षरत मोडेल नियिषको के.सी को आगामी दिन सफल रहोस् । #शुभकामना !!